कैलाशको कुटी: What i supposed to write (खै म के लेखुँ) ?
खै म के लेखुँ ?
लौन ! दिमागमा थुप्रै कुरा छरपष्ट भएकोले हो वा दिमाग नै शुन्य भएकोले हो म असमञ्जस्यमा परे। यत्तिका दिन भइसक्यो, अब त मेरो कुटीमा केही न केही त लेख्नैपर्छ भनेर यसो घोरिए । मनुवाको प्राण धान्नलाई यसो काम गर्नैपर्नै। काम गर्दा यसो नून त खाईहालिन्छ। मतलब साहूको नून खाएपछि के हुन्छ ? यसो झोक्राउँने बाध्यता त परिहाल्छ नै। कुनैपनि लेख्न मन लाग्ने कुरा पो भेटिन। आ ... खै म के लेखुँ ? भन्दै नाक खुम्चाउँदै थिए। एक्कासी 'ल यो पनि मेरो कुटीको खुराकै हो नि' भन्ने लाग्यो।
त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाही केही साथीहरुले भन्ने गरेको 'खै म के भनु', 'जी मे क्या बोलु', 'what i supposed to say'भन्ने कुराले दिमागमा क्लिक गर्यो। अनि त के चाहियो र। एकचोटीलाई यही सही। जे पर्ला पर्ला नी। ए ... अब मलाई नि यही कुरामा ब्लगिङ गर्दा आउने कमेन्टको प्रसङ्गको सानो अनुभव लेख्न मन परिनिस्क्यो है। मनचिन्ते मान्छे, मनले चिताको लेखीहाल्छु है म। केही साथीहरु मलाई भन्थे 'तिम्रो ब्लग पढे'। केही कमेन्ट देउ न त भन्दा भन्थे 'खै म के भनूँ ?' तर आजकाल केही साथीहरुले कमेन्ट लेखीदिनुहुन्छ अनि स्वाद लाग्छ।
कमेन्टको कुरामा एकजना साथी छन् मैले भेटेको। जसले मेरो ब्लगमा हालेको कुरा हैन, त्यो कुरा पढेर अरुले गरेको कमेन्ट मात्रै पढ्न रुचाउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ पढीहालेमा पनि १ हरफ धेरै पढेको खण्डमा १ अनुच्छेद। ब्लगको कुरामा 'कमेन्ट आउन थालेछ नि' भन्छ। अनि मेरो लेखनको बारेमा नि भन्ने पश्नमा उ पनि भन्छ 'खै म के भनुँ ?'। सकारात्मक तथा नकारात्मक कमेन्ट पाउँदा लेख्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन तथा आफ्नो शैली, क्षमता, खुबीबारे जानकार त भइन्छ नै। तर कमेन्ट गर्दा पनि त उत्तिकै खुबी र मन चाहिन्छ। अनि फेरी कमेन्ट मात्रै पढ्न रुचाउँने व्यक्ति पनि छन् भन्ने थाहा पाएपछि त कमेन्टको महत्व अझ बढी नै पो हुँदो रहेछ। यसबारेमा अरु 'खै म के भनु र?' अन्य कमेन्टटेटर साथीहरुको जिम्मामा छाडीदिन्छु है। पालो तपाईहरुको पनि, अब हेरौ 'खै तपाईहरु के भन्नुहुन्छ?।
Posted by कैलाश at 9:26 AM
यस्तो राम्रो लेख्ने मान्छेलाई म खै के भनौँ ? :)
बल्ग वा कुनै पोष्ट नपढि कमेण्ट मात्रै पढने पनि पाठक हुन्छन र भन्या ? । हुन त तितो पिरो कमेण्टबाट ब्लगरलाई प्रोत्साहन र जिम्मेबारी दुबै दिन्छ र यसले ब्लगमा नुनको काम गर्छ । तर खाना वा तरकारी नखाई नुनै नुन मात्रै खाँदा कस्तो स्वाद आउला त?
अनी तपाईको यो पोष्ट र साथै राखिएको नर‍-कंकालको चित्र बिचको तारतम्य भने मैले बुझीन है । की आर्को पाली लेख्ने ब्लगको अग्रिम 'प्रि क्याप' हो ?
दिलीप जी हुँदारहेछन् नि त त्यस्तो। नून मात्रै खाने मान्छे हुन्न होला सायद । तर कमेन्ट पढेरै कमेन्ट गरेको कुरा के बारेमा हो भनेर बुझ्ने बानी बसालेको हो कि मात्र भन्न सक्छु अहिलेलाई । तैपनि म फेरी अर्को भेटमा सोध्छु अनि भनौला । अनि फोटो र ब्गलको तारतम्यको बारेमा म के भनौ? केही त भनौ न है । हेर्दा नर कंकाल देखिएको जरुर छ । तर परिवेशअनुरुकै कल्पनाशक्तिले हेर्दा त्यसको अनेकौ रुप देखिन्छ । त्यसैले त्यो पनि कमेन्टकै लागि हालेको हुँ । 'खै म के भनौ' भन्ने शिर्षकमा तारतम्य मिलाउँदा त्यो नरकंकालले निकै नै गम्भीर मुद्रामा आफ्नै पूरा आकृतिलाई हेर्दै केही सोचीराखेको छ कि ? अथवा अन्य कुनै हिसाबले विश्लेषण गर्न सबैलाई छुट छ नि ।
कैलाश जी, शङ्कर लामिछानेलाई त्यस्तै पीर परेको थियो रे । उसले के भनेको थाहा छ ?
'के लेख्नु ? आलुप्याजभाण्टा ? म ऊ त्यही पात झरेको आलुबखडाको रुख झैं निर्वाङ्ग भइसकेको छु । कुनै दिन पात पलाउलान्, काइना निस्केलान्, फूलका केस्रा टुसाउलान्, फल लाग्लान् भन्ने आशामा छु । ....
लेख्नलाई भन्ने नै हो भने यतिका कुराहरु छन कि , जहाँ हेर्यो त्याँहा लेख्नुपर्ने कुरा हुन्छ तर यहाँ समयले , तपाईंले भनेझैं नुनले र जाँगर चल्ने नचल्ने भन्ने गुनले फरक पार्छ । अँ तपाईंको तरिकाले भने प्रभाव पार्यो है । पहिलो चोटी कमेण्ट लेख्दैछु त्यसकारण यहाँभन्दा धेरै त खै म के भनुँ ?
रहयो चित्र - त्याँहा सोचमग्न कंकाल छ र उ बसेको टुल ( नेपालीम के भन्ने होला ? ए अलि अग्लो पिर्का ) । कंकालको छाँया देखाईएको छ तर अलि गहिरिएर हेर्नुपर्ने गरी । अगाडीपट्टी मान्छेको आक्रिती ( यो aakriti लेख्न कसैले मलाई सुझाईदिए हुन्थ्यो ) र पछाडी पट्टी पिर्काको पनि आक्रिती देखाईएको छ । तर यहाँ दोछाँया परेको स्थिती नभएकोले भ्रम उत्पन्न गर्न खोजिएको छ । आजका मान्छेहरु आफ्नो आकार प्रकार र प्राप्ती खोज्दा खोज्दै कंकाल भैसकेको थाहाहुंदैन भन्ने ब्यंग हो कि ? कंकालको सोचमग्न मुद्रा तपाईंको लेखाईसंग मेल खानसक्छ ।
दीपक जी मेरो कुटीमा पो पहिलोपल्ट कमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ त । कि कसो हो कुन्नी? यदि म गलत छुइन भने अन्य साथीहरुको ब्लगमा तपाईको कमेन्ट देखेको छु ।
त्यो आकृति लेख्नलाई सजिलो छ । (आ + क + shift bracket open + ति) बस काम तमाम् । ट्राइ गर्नुस है त ।
कमेन्टको लागि धन्यवाद सबै साथीहरुलाई ।
खित् खित् खित् मैले भन्नपनि तपा ईंकै ब्लगमा पहिलो चोटी कमेण्ट लेख्दैछु भनेको थिएं ।
कैलाशजी aakriti लेख्न तपाईंले सिकाउनु त भयो तर मैले सिक्न सकेको भए मरिजानु । के गर्ने बोधो दिमागमा हम्मेसी कुरै नछिर्ने भन्या फेरी हेर्नुस् न यतिबेला dhrishTata लेख्नुपर्ने नसकेर हैरान भन्या । मेरो त गजल नै गला लाग्ने भयो त्यो यौटा शब्द लेख्न नसकेर । लौ न अझै स्पस्ट परिदिन सक्नुहुन्छ भने म आशामा बसेको छु ।
त्यो आकृतिको बारेमा झन कन्फ्यूज भयो:
पहिलो कुरा त बसेको कंकालको छायाँ छाहि उभ्भिएको छ, अनी हड्डी मात्र भएको कंकालको छायामा भने हट्टा कट्टा मानिसको जस्तो सरीरको सबै अबयबहरु देखिन्छन् । तर कल्पनमा त जे पनि हुनसक्छ नी कसो?
तपाई यदि Nepali Unicode (Romanized) प्रयोग गर्नुहुन्छ भने:
“आकृति” लेख्‍न AkRti टाईप गर्नु होला
“धृष्टता” लेख्‍नलाई DRz/qta टाईप गर्नु होला
माथी दिईएका capital र small key combination जस्ताको त्यस्तै थिच्नुभयो भने तपाईको समस्या समधान होला ।
कागजको एउटा पन्नामा कागजलाई नै काटेर बनाइएको सृजना हो यो । बस्तुलाई जति मिहिन ढंगले केलायो त्यत्ति नै अनेकौ सवाल पैदा हुन्छन् । अनि दिलीप जी तपाईको भनाईमा सहमत छु । मानव मन र मष्तिस्कको कल्पनाको सीमा कहाँ र के होला ? यो झन् गहिरो कुरो पर्यो मेरो लागि ।
दीपक जीको गजलको गला त किन पो लाग्थ्यो र कठै । साथीहरुसँग समस्या बाँडियो भने कतै न कतैबाट केही सहयोग भइहाल्छ नि । चाहेपछि केही न केही त भइहाल्छ साथी ।
बहुत बढिया धन्यवाद साथीहरुलाई! दोहोरो संवाद र दीपकजीको समस्याको हल गर्ने कोशीसको लागि ।
der Misslungene Gedanke levitra vs viagra forum viagra generika [url=http//t7-isis.org]viagra ohne rezept[/url]